၎င်းတို့အား Tech မှကျောင်း - Togaf သင်တန်းနှင့်အတူအကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြေရှင်း
ဘယ်လို Togaf နှင့်အတူလက်မှတ်ရယူပါ:
TOGAF®အိုင်တီနှင့်စီးပွားရေး align လုပ်ဖို့များအတွက်ဗိသုကာများအတွက် defacto လက်မှတ်ဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါနံပါတ်များ world.It အနှံ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းတဲ့လူများတိုးပွားလာနှင့်ကိုယ်အဘို့အမပြောတတ် "ဒီပွင့်လင်း Group မှဗိသုကာမူဘောင်" ရဲ့အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ် - ဒါဟာ EA ၏အလုပ်ဖျော်ဖြေများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း-စံနည်းစနစ်များနှင့်မူဘောင်သည်နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကအသုံးပြုနေသည် အသိပညာအမျိုးမျိုး organizations.The ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အိုင်တီပညာရှင်များဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်အတိုင်ပင်ခံ၏တွေအများကြီးအတော်လေးအသုံးဝင်သည်နှင့်တစ်ဦးမဆို seasoned အိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘို့ရှိရမည်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူအောင်မြင်မှုများအတွက်ဇာတ်စင်သတ်မှတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု transformations.Many နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်း initiaves မှအသိပညာ၏ဤခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောအစပျိုးတာဝန်ခံကလူလက်ျာအချိုးအစားရှိလူများ, လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုပေါင်းစပ်ဆက်လက်အောင်မြင်မှုသေချာနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအသွင်ပြောင်း၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိနားလည်ကြောင်းအာမခံပါသည်။TOGAF® 9.1 ဖောင်ဒေးရှင်း (အဆင့် 1) &TOGAF® 9.1 လက်မှတ်ရ (အဆင့် 2)ဖွငျ့လေ့ကငျြ့ရေး ဆန်းသစ်နည်းပညာ Solutions ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားလေ့ကျင့်ရေးအခန်းနှင့်အတူကော်ပိုရိတ်သင်တန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေ Gurgaon ၌တည်ရှိ၏အပေါင်းတို့နှင့်အိန္ဒိယကျော် accross ။
TOGAF defining: တစ်မူဘောင်အဖြစ် TOGAF ပြည်နယ် BE မှ TO IS AS ကနေပြောင်းရွှေ့နေချိန်တွင်တစ်ဦးကသင်၏ဗိသုကာစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီနိုင်မယ့်နည်းစနစ်အဖြစ်တိုတိုရှင်းပြနိုင်ပါသည်။ ကဲ့သို့ဖြစ်၏သင့်လက်ရှိအိုင်တီရှုခင်းများမှတစုံတခုတိုးတက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏မစ်ရှင်ပြီးမြောက်ဆီသို့ဦးတည်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးအပေါ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုလိမ့်မည်နှင့်သင်မည်သို့ရှိအားလုံးဂရုစိုက်တတ်တဲ့သွက်လက်လာပြီနှင့်သမိုင်းမှတ်တိုင်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိပိတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဦးတည်သွားရပါဘူး။
ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီဖောက်သည်သူ့ဟာသူအတွက်ကိစ္စတွင်လေ့လာမှုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရနိုင်သည်, အိုင်တီအသွင်ပြောင်းဖို့မတစ်ခုတည်း, ငွေကျည်ဆံလည်းမရှိအတွေ့အကြုံကနေလူသိများသည်။ အဆိုပါပိုကြီးတဲ့အတွက်အစုစုကို, ပိုခက်ခဲကြောင့်အုပ်စုတစ်စုသို့ဖြောင့်ဂျာကင်အင်္ကျီကရန်ဖြစ်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံကိုဖောက်သည်အတူလမ်းလျှောက်နေဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Togaf သင်တန်း ရထားသင် casestudies တစ်တွေအများကြီး Eturnti လုပ်ငန်းအတိုင်ပင်ခံအနေဖြင့်အသိအမှတ်ပြုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတိုးပွားရကြလိမ့်မည်နှင့်ငါတို့၏သက်သေခံချက်ကိုတူညီတဲ့အဘို့အ မှနေ. ၎င်းတို့ကိုထောက်ခံပေးရမည်။TOGAF အဖွဲ့အစည်းများတစ်ဦးကြိုးစားခဲ့နှင့်စမ်းသပ်ပြီးအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီးတန်ဖိုးအားရရှိခဲ့ကြရင့်ကျက်သောနည်းစနစ်ဖို့ဗိသုကာဖျောထုတျ။ အဆိုပါကံဇာတာစာရင်းအတွက်ကုမ္ပဏီအတော်များများကကျယ်ပြန့်သူတို့ရဲ့ stack ကိုက်ညီနှင့်၎င်းတို့၏နာကျင်မှုအချက်များ, ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှသူတို့ကို လိုက်. အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
၏သင်တန်းကိုယူပြီးပြီးနောက် Togaf သင်တန်း, သငျသညျဗိသုကာကပြောပြတယ်ဘယ်လိုကြောင့်သွက်လက်ရောနှောဖို့ ablility ရလိမ့်မည်။ ဗိသုကာ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗိသုကာ၏ဖြေရှင်းနည်းအဘို့အလွန်အသုံးဝင်သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းနှင့်အတူရွှေ့နှင့်မည်သို့လက်တွေ့တွင် Togaf EA ၏မူဘောင်လျှောက်ထားရန်အဖြစ်။ TOGAF 9.1 ၏လက်တွေ့အသိပညာဗဟုသုတဖြင့် TOGAF အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရှင်းလင်းပြီး TOGAF 9.1 လက်မှတ်ရဗိသုကာဖြစ်လာရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။ တစ်ဦးကအမှုလေ့လာမှုသင့်အဖွဲ့အစည်းအဘို့အ TOGAF 9.1 သုံးပြီးနှင့်စက်ချုပ်၏လက်တွေ့ခြမ်းရရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်သည့်သင်တန်းမှတဆင့် run ပါလိမ့်မယ်
တစ်ဦးကအမှုလေ့လာမှု, ပဟေဠိနှင့်အတူလက်ဆွဲ crosswords တူသောအစစ်အမှန်ဘဝနမူနာသဘောတရားများနှင့်မြှင့်တင်ရန်သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံအတွက်လမ်းဖြစ်စေခြင်းငှါအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းသင်ယူမှုတင်ရန်အချိန်ဘောငျလှုပ်ရှားမှုအစည်းအဝေးများနှင့်ကင်း quizzes-ဆက်စပ်ပူးတွဲဖို့သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးအပြေးလိမ့်မည်။
Togaf သင်တန်းမှာတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း pass ၏ရာခိုင်နှုန်းအလွန်မြင့်မားခဲ့ခြင်းနှင့်လှောင်ပြောင်စာမေးပွဲနှင့်အပြန်အလှန်အစည်းအဝေးများအများကြီးယုံကြည်မှုနှင့်အတူလက်မှတ်ကိုရှင်းလင်းဖို့ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားရန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမသွားအောင်ပါလိမ့်မယ်။